यि युवतीका कारण को’रोना भा’इरस संसारभर फैलिएको खुलासा, हेर्नुहोस् भिडियो बन्यो भाइरल ! «
यि युवतीका कारण को’रोना भा’इरस संसारभर फैलिएको खुलासा, हेर्नुहोस् भिडियो बन्यो भाइरल !
Published : 25 January, 2020 9:01 pm
चीनमा कोरोना भा’इरस सं’क्रमितको उपचारमा खटिएका एक डाक्टरको नि’धन भएको छ। चीनको हुबेई सिन्ह्वा अस्पतालमा कार्यरत ६२ वर्षीय डाक्टर लियाङ वुदोङको को’रोना भा’इरसकै कारण नि’धन भएको चिनियाँ सञ्चार माध्यम चाइना ग्लोबल टेलिभिजनले लेखेको छ ।
उक्त समाचार अनुसार को’रोना भाइ’रसका कारण डाक्टरको नै नि’धन भएको सम्भवतः यो पहिलो घ’टना हो। डा वुदोङको निधनसँगै चीनमा को’रोना भा’इरसका कारण नि’धन हुनेको संख्या ४२ पुगेको छ। भाइरसका कारण चीनमा १ हजार २ सय भन्दा बढी सं’क्रमित भइसकेका छन्। डा वुदोङ को’रोना भा’इसरको नियन्त्रणका लागि निरन्तर खटिएका थिए। चीनमा यो भा’इरस सबैभन्दा पहिला उहान सहरमा भेटिएको थियो।
उनीहरुबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपालमा पनि चीनको वुहान प्रान्तबाट फर्केका एक वि’रामी विद्यार्थीमा सं’क्रमण फेला परेको हो। हालसम्म चीनमा उक्त घा’तक भा’इरसका कारण ४१ जनाको नि’धन भइसकेको छ। १२८७ जना मानिस स’ङ्क्र’मित छन्। को’रोना भा’इरसको स’ङ्क्र’मण फैलिने चि’न्ता बढेपछि चीनले ख्हबेई प्रान्तका नगरहरूमा यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। करिब दुई करोड मानिसलाई यात्रा नगर्न निर्देशन दिइएको छ।
यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो भाइरल बनेको छ। जसमा युवतीले चमेरो खाएपछि उनी मार्फत कोरोना भाइरस फैलिएको दा’बी गरिएको छ। डेलिमेलको एक रिपोर्टमा युवतीले चमेरोको झोल पिउँदै गरेको देखिन्छ।
चमेरोबाट नै भा’इरस पैदा भएको कुराको पुस्टी भने भएको छैन। चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरूले अझै पनि भाइरस कहाँबाट आयो भन्ने कुरा खोजीरहेका छन्। अधिकारीहरुले वुहानको समुद्री क्षेत्रबाट भाइरस आएको विश्वास गरेका छन् । जहाँ गैरकानुनी रुपमा वन्यजन्तुको किनबेच हुने गरेकोे छ। एक चिनियाँ वैज्ञानिकले को’रोना भा’इरस स’र्प र जं’गली बिरालोबाट मानिसहरूमा फैलिएको बताए।
यो भाइरसको केन्द्रविन्दु रहेको चीनको वुहानमा मानिसहरुले स’र्प, च’मेरो, भ्यागुता,मार्मोट्स, खरायो लगायतका जिवजन्तु खाने गरेका छन। चिनियाँ वैज्ञानिकहरुका अनुसार चिनियाँ को’ब्रा स’र्प पनि को’रोना भा’इरसको स्रोत हुनसक्छ। चीनमा स’ङ्क्र’मण बढ्दै गएपछि ज्या’न जानेको सङ्ख्या अझै बढ्ने भय व्यक्त भइरहेका छन्।